Solar Backpack, Outdoor Solar Backpack, Multi-function Kutengesa Backpack Vaiti nevatengi muChina
Tsanangudzo:Solar Backpack,Outdoor Solar Backpack,Multi-function Kutengesa Backpack,Smart Outdoor Solar Backpack,,
Solar Backpack,Outdoor Solar Backpack,Multi-function Kutengesa Backpack,Smart Outdoor Solar Backpack,,
Home > Products > Solar Power Bank > Solar Backpack
Zvigadzirwa zve Solar Backpack , isu tiri vashandi vanobva kuChina, Solar Backpack , Outdoor Solar Backpack vatengesi / firisi , mabhizimisi ekugadzirwa kwezvakakura zve Multi-function Kutengesa Backpack R & D nekugadzira, isu tine shanduro yakakwana yekutsvaga kutengesa uye kutsigirwa kwekambani. Tarisira mberi kubatana kwako!
China Solar Backpack Vatengi
The gwenya mukwende absorbs rezuva simba kuburikidza rezuva ukomba uye vatendeuki kuva magetsi. Inenge yakachengetwa mubhateri, iyo inogona kutengesa kana kusimbisa zvakasiyana-siyana zvemafoni efoni kana michina yemagetsi maererano nemaitiro akasiyana-siyana. Inokodzera kushandiswa kwekukurumidzira kana pasina magetsi mumunda. Denga rekudenga rinoratidzika sechikwata chenguva dzose muchimiro, asi musiyano ndewokuti kune jira rezuva riri mberi kwayo. Dare rezuva rinobata simba rezuva uye rinoshandura iro kuti rive mutoro wegesi, paunenge uchichengetedza mutoro wakanamatira mubhokisi remasimba. Bhokisi rebhokisi rakavanzwa kumashure kwebhegi rako uye rakabatana zvakananga kune foni yako, MP3 player, nejeri kameraja kamera. Inoshandiswa kune zvakasiyana-siyana zvefoni, MP3, MP4, kamera dzemakambani, ipads, ipods nezvimwe zvinhu zvemagetsi